Kabul Oo Baroor Diiq U Sameyneysa Askartii Lagu Xasuuqay Weerarkii Feylaqa 209aad | Radioandalus24
Kabul Oo Baroor Diiq U Sameyneysa Askartii Lagu Xasuuqay Weerarkii Feylaqa 209aad
Madaxweynaha Xukuumada dabadhilifka ah ee Kabul ayaa maanta oo Axad ah ku dhawaaqay baroor diiq loo sameynayo ciidamadii lagu laayey weerarkii halyeeynimo ee jimcihii la soo dhaafay lagu qaaday Xerada Shaahiin ee Feylaqa 209aad ee ka howlgala waqooyiga wadanka, Isagoona sidoo kale si daran kaga qeyla-dhaamiyey qasaaraha ciidankiisa ka soo gaaray weerarkaasi.
Weerarkan oo ahaa howlgal inqimaasi ah oo ay fuliyeen 10 halyeey oo istish-haadiyiin ah ayaa socday muddo sideed saacadood oo xiriir ah, wuxuuna galaaftay nolosha ugu yaraan 200 oo askari, halka ku dhawaad 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Ashraf Ghani, Madaxweynaha Xukuumada Kabul oo booqday saldhigga ayaa tagay meel la isugu keenay baqtiga askarta oo ku jira Naxash lagu qaado meydadka, Wuxuuna sheegay in waxa meesha ka dhacay uu ahaa xasuuq fool-xun oo fuleynimo sida uu warka u dhigay.
Weerarkan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu xumaa ee ay la kulmaan ciidanka Xukuumada Kabul tan iyo sanadkii 2012-ka xilligaas oo sidan oo kale koox Inqimaasiyiin ah oo ka tirsan Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ay weerareen saldhig ciidan oo ku yaalla gobalka Helmand ee Koonfurta wadankaasi.
Saraakiil u hadashay Xukuumada Kabul ayaa xaqiijiyey in wax ka badan 140 askari lagu dilay weerarka, sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa 160 kale taas oo dhimashada iyo dhaawaca marka la isku geeyo ka dhigeysa ilaa 300 oo askari. Wazaarada gaashaandhiga ee Xukuumada Kabul ayaa dhankeeda xaqiijisay qasaaraha intaas la ee ciidankooda ka soo gaaray weerarkaas
Balse si kasta oo ay noqotaba, Imaarada islaamiga Afghanistan oo sheegatay mas’uuliyada weerarkan waxay aaminsan tahay in qasaaruhu uu intaas ka badan yahay, islamarkaana 500 oo askari ay halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen.
Imaaradu waxay sheegtay in afar ka mid ah tobanka dagaalyahan ee fuliyey weerarka ay ku diyaarsanaayeen xerada, ayna muddo dheer ka shaqeynayeen halkaas iyagoo sugaya saacatu-Sifirka weerarka.
Inkastoo Xukuumada Kabul ay isku dayeyso in ay qariso qasaaraha baaxadda leh ee ka soo gaaray weerarkii Xerada Feylaqa 209aad hadana waxay ku qasbanaatay in ay qirato in qasaaraha ka dhashay weerarkaas uu ahaa midkii ugu xumaa ee ay la kulmaan muddo sanado ah.
Mareykanka waxaa hadda Afghanistan ka jooga 8,400 oo askari, waxaana joogitaankooda halkaas ku wehliya ilaa 5,000 oo askari oo iyagana ka socda isbaheysiga isku magacaabay NATO ee hogaaminayey duulaankii lagu qaaday dalkaas dabayaaqadii sanadkii 2001-dii.
Updated: April 23, 2017 — 4:32 pm